အဆိုပါမြို့ဘတ်စ်ကားထိပ်တန်းအဆင့်လုံခြုံရေး - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီတမြို့လုံးဘတ်စ်ကားများတွင်အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေး
10 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
လုံခြုံရေးပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါက de အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိ
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ် Project မှချုပ်ဝင်စက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေး Inc ၏သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများမြို့တော် (Bugsaş), တူရကီအဝေးပြေးကား Terminal နှင့် (ASTI),7/ 24 လုံခြုံရေးအစီအမံများနှင့်အတူအကြီးတန်းနိုင်ငံသားများ၏အသက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏လုံခြုံရေးအတွက်၌ကြီးသောလုံ့လဝီရိယနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ခွေးလေးနှင့်အတူ detectors Explorer နဲ့စာရင်းစစ်
တက္ကသိုလ်များ, တဖြည်းဖြည်းသမိုင်းဝင်မြို့ဘတ်စ်ကားခရီးသည်ချဉ်းကပ်ဖွင့်လှစ်ထိပ်တန်းအဆင့်လုံခြုံရေးအစီအမံ7/ 24 Bugsaşလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများအလုပ်လုပ်ကိုင်အတူပြင်းထန်မှုအတွက်တိုးမြှင့်ထားပြီး, လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတူရကီပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှုအတွက်ထိန်းချုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
စစ်ဆေးခြင်းအတွက် detector ခွေးကုမ္ပဏီများမှပိုင် input ကိုထွက်ခွာဘတ်စ်ကား, ခရီးသည်တင်အိတ်ကို, ကုန်တင်ကုန်လှောင်ရုံ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်နှင့်ဧရိယာ၌ရှာဖွေမှုများကိုထွက်သယ်ဆောင်အပြီးအပိုင်၎င်းတို့၏အထုပ်အပိုးရုံးသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Bugsaşအရာရှိများ, နိုင်ငံသားများအဘို့ငြိမ်သက်ခြင်းသည်မြို့ကိုဘတ်စ်ကားခရီးသွားမှတ်တမ်း, ဖော်ပြထားသည်အတွက်တိုးချဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံများကိုယုံကြည်စိတ်ချ
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေ, ပတ်ဝန်းကျင်၏လုံခြုံရေးကိုခြိမ်းခြောက်သည်ဟုအခြေအနေများမှအထိခိုက်မခံဖြစ်, မသင်္ကာမှုကိစ္စနှင့် ဆက်စပ်. တာဝန်ရှိသူများကူညီခြင်းဖြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေး, ငါတို့သည်သင်တို့အာဏာပိုင်များနှင့်ဆက်သွယ်ပါကြောင်းမေးပါ" လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။
တမြို့လုံးဘတ်စ်ကားများတွင်အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေး 02 / 03 / 2018 တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ကုမ္ပဏီ Capital ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး & ဂတ်စ်န်ဆောင်မှုများ Project မှချုပ်ဝင်စက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေး Joint Stock Company (Bugsaş) ကိုတူရကီအဝေးပြေးကား Terminal နှင့်အုပ်ချုပ်ရေး (ASTI) အတွင်းအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်, အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးအစီအမံများနှင့်အတူမှောင်ခိုနှိမ်နင်းမထားဘူး။ တမြို့လုံးဘတ်စ်ကားပေါ်စာရင်းစစ်, မြို့တော်စတင်ရန် moonshine လေ့လာခဲ့စီးကရက်ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်အလှကုန်။ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများ, X-ray စက်ကိရိယာများ, မိုဘိုင်းနှင့်မြို့ဘတ်စ်ကား, ပုံသေကင်မရာများနှင့်အတူလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာထိန်းသိမ်းထားတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတံခါးဝ၌ကျင်းပခဲ့သည်နှင့်တရားမဝင်ဖြန့်ချိခံရဖို့ထိန်းချုပ်မှုကိုချောင်းမြောင်းနေသည်တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကသိမ်းယူထားသောမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ 120 မကြာခဏတစ်နေ့လျှင်တစ်တထောင်ဧည့်သည်ထက်ကလေးပြန်ပေးဆွဲခံရသည်လက်နက် ...
တူရကီအတွက် Metro ဘူတာများတွင်အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေး 26 / 08 / 2017 တူရကီအတွက်မြေအောက်ရထား, Ankaray နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုဘူတာရုံလုံခြုံရေးပလီကေးရှင်းအသစ်တခုခေတ်ကစတင်ခဲ့သည်။ ယခင်ကသတ္တုတံခါးကို detectors အများနှင့် X-Ray က devices ယခုထွက်သယ်ဆောင်ခံရဖို့လက်-ကျင်းပသတ္တု detector လုံခြုံရေးရှာဖွေမှုများကိုအတူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါစနစ်သစ်ကိုလည်းသတ္တုတံခါးကို detector ကင်မရာထားရှိပါလိမ့်မည်ပေါ်မှာမျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု system ကိုရှိပါတယ်, ထိုမက်ထရိုဘူတာရုံ၏ဝင်ပေါက်မှာတည်ရှိပါတယ်အိတ်ခရီးသည်များ၏အိတ် X-Ray စက်ကိုအားဖြင့်ဆန်းစစ်ပါလိမ့်မည်။ မြို့တော်ဝန် Melih, ထို့နောက်နမူနာ application ကိုသစ်ကိုစနစ်အားလုံးဘူတာပါဝင်သည်မယ်လို့ဖျောဘူတာရုံထဲတွင်နေရာÇayyoluမြေအောက်သတ္တုသုတေသနနှင့် Exploration (MTA) ၏ပထမဦးဆုံးစက်ကို။ ကိုမဆိုအဆိုးမြင်စိတ်တွေသာအစီအမံကိုသမ္မတရည်ရွယ်သည်ဟုအလေးပေးများအတွက်လျှောက်လွှာဖန်ဆင်းထားသည် ...
Turner အတော်လေးမှ TCDD ရဲ့အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့ 06 / 02 / 2013 အဆိုပါတွေ့ရှိခဲ့3လူတွေအကြီးတန်းအမှုဆောင်လက်ထောက်၏ 28 အထွေထွေမန်နေဂျာအပါအဝင်အတော်လေး TCDD အတွက် Turner ၏ TCDD ရဲ့အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့, 5-8 ဖေဖော်ဝါရီလအိပ်ဆောင်လေးအစားလာမည့်တထောင် 278 ကိစ္စကိုကျော်အဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေအတွက်အလုပ်လုပ်သွား၏။ အဆိုပါ TCDD တာဝန်ရှိသူများကပေးအပ်သတင်းအချက်အလက်များအဆိုအရ 42 52 အထူးသဖြင့်မကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်း, အကျိုးစီးပွားမီးရထား၏စီးပွားရေးခရိုင်အတွင်းရှိမြို့လယ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်, အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) ဝန်ဆောင်မှုစလိုင်းသွင်းခြင်းဖြင့်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ ပစ်မှတ်, ဘူတာနှင့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသန့်ရှင်းမှု, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖမျးဆီးဖို့ယေဘုယျအားဖြင့်တူရကီရဲ့အဆင့်အတန်းနှင့်ဘူတာရုံတိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်ပေးသောအဖွဲ့အစည်းများ၏မန်နေဂျာများ ...
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား-DB အဆင့်မြင့်အလုပ်အဖွဲ့ Group ၏အစည်းအဝေးဘာလင်တွင်ကျင်းပခဲ့သည် 02 / 02 / 2016 VII မှာ "တူရကီပြည်နယ်မီးရထား-DB အဆင့်မြင့်အလုပ်အဖွဲ့ Group ၏" တူရကီပြည်နယ်မီးရထား-DB အဆင့်မြင့်အလုပ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးဂျာမနီမှာ 2012 နှစ်ပေါင်းကတည်းကဘာလင်တွင်ကျင်းပနှင့်တူရကီအကြားရှိရထားလမ်းများတွင်လက်ရှိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသစ်တွေဒေသများအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက်အလုပ်လုပ်ဆက်လက်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်ဘာလင်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ Cargo သိုင်းကြိုးအီဘရာဟင်၏ Adem ဌာနမှူးဦးဆောင်သောတူရကီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဦးစီးဌာနလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ၏ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးသံမဏိ၏နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးဆောင်ခြင်းနှင့်စကားပြန်ပင်လယ်ခြင်္သေ့ရာအရပျကိုယူ။ ဂျာမဏီနှင့်ဂျာမဏီ-တူရကီ-အီရန်လိုင်းအသစ်သည်ကုန်တင်ရထား၏အချိန်သို့ခံရမည်နှင့်ပညာရေးကိစ္စများအမျိုးမျိုးဆွေးနွေးကြ၏ - တူရကီ, နှစ်ဦးစလုံးပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးမှာလာသောအစည်းအဝေးမှာ။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထား-DB အရာရှိများ, တွဲဖက် ...
Shell ကထိပ်တန်းအဆင့်ချိန်း 07 / 09 / 2017 Burcin Toktamışအတွက် shell & Turcas လက်လီလက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာအရောင်းနှင့်လုပ်ငန်းမန်နေဂျာကဏ္ဍအားလုံးတွင်အတွက် shell ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ရေယာဉ်စုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရရှိထားသူများနှင့်အရောင်းရုပ်သံလိုင်း, ဂလိုဘယ်စျေးကွက်ဒါရိုက်တာတာဝန်ရှိသည်, ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများ, စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စီးပွားဖြစ်ရေတပ်နှင့်လိုင်းများ၏ shell မှာရာထူးခန့်အပ်ခဲ့သည် ကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဂလိုဘယ်စျေးကွက်ဒါရိုက်တာ Burcin Toktamışများ၏အနေအထားဖြစ်သည်။ Toktamış'ınရှဲလ်အတွက် Burcin ရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း 23 နှစ်ပေါင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ကဏ္ဍစီမံခန့်ခွဲမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းချက်ချင်းရှဲလ်၏ကောလိပ်ဘွဲ့ရပြီးနောက်, ကုမ္ပဏီ 23 နှစ်ကျော်၏အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်Toktamış'ınနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်းထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်း, Supply Chain, အရောင်း, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Channel ကို ...
တူရကီအတွက် Metro ဘူတာများတွင်အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေး
အက်စကက်အဆင့်မြင့်တဲ့ Expert Group မှတူရကီကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်အတွက် TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကို 's Start ကိုခေါ်ယူ
Yöneticierအတွက်တူရကီအလုပ်အမှုဆောင် Testifies အတွက်မီးရထားမတော်တဆ
ASTI Ankaray အတွက် Metro နှင့်အပြည့်အဝလုံခြုံရေး